Sida loo tirtiro codsiyada ku jira iPhone-ka oo leh iOS 13 | Wararka IPhone
Iyadoo la sii daayo macruufka 13, ragga ka socda Cupertino waxay ku dareen tiro astaamo cusub oo inbadan oo naga mid ahi ay filayeen. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa habka mugdiga ah, qaab beddelaya caddaanka madow, labadaba nidaamka nidaamka iyo codsiyada taageera qaabkan.
Laakiin sidoo kale waxay la timid waxyaabo badan oo is qurxin iyo bilic soocelin ah sida habka loogu talagalay cusbooneysii barnaamijyada ama habka ay tahay inaan u tirtirno codsiyada aan ku rakibnay qalabkeena. Maanta waxaan ku tusinaynaa kan dambe: sida loo tirtiro barnaamijyada ka soo baxa iPhone iyo iPad ee leh iOS 13 / iPadOS 13.
Sababta ay Apple wax uga bedeshay habka loo cusbooneysiiyo barnaamijyada ama loo tirtiro lama garanayo, laakiin marka laga hadlayo kii hore waxay u badan tahay in la dhiirrigeliyo si aan daarno cusbooneysiinta otomaatiga ah oo waxaan markasta haynaa nooca ugu dambeeya ee arjiga la heli karo. Haddii aad rabto inaad tirtirto barnaamijyadaas aanad hadda isticmaalin, waa inaad ku dhaqaaqdaa tallaabooyinka soo socda.
Marka hore, waa inaad hoos u dhig astaanta codsi illaa iyo inta laga helayo liiska xulashooyinka.
Ka mid ah xulashooyinka kala duwan ee la soo bandhigay, waa inaan gujinnaa Dib u diyaari Barnaamijyada.
Xulashada ikhtiyaarkan, codsiyada waxay bilaabi doonaan inay muujiyaan qoob-ka-ciyaarka yar ee caadiga ah ee ay had iyo jeer muujiyeen markii aan rabnay inaan tirtirno codsi.
Si aan u tirtirno codsi gaar ah, waa inaan kaliya dhagsii X-ga ku yaal geeska bidix ee kore dalabka oo ku xaqiiji tirtirka sanduuqa xaqiijinta ee muuqda.
Mar alla markii aan dhammeyno, guji OK, oo ku taal geeska kore ee midig ee shaashadda si aad u dhammeysid howsha noo oggolaaneysa inaan tirtirno codsiyada haddii boosteejadeennu ay tahay iPhone X iyo wixii ka dambeeya. Haddii ay tahay iPhone 8 ama moodal hore oo wata ID ID, waa inaan riixnaa badhanka bilawga si aad u dhamayso hawsha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Sida loo tirtiro barnaamijyada ku saabsan iPhone oo leh iOS 13
Waxaan hayaa IPhone XR oo leh IOS 13.1.2 oo haddii aad hayso astaan ​​kasta oo la riixo muddo dheer oo ku filan waxay galayaan qoob ka ciyaarka si loo tirtiro, uma baahnid inaad doorato dib u habeyn ama wax uun.
Dhab ahaantii! Waxaan u imid inaan isla idhaahdo
Ka taxaddar, haddii waxyaabaha ku jira iyo xaddidaadaha asturnaanta la awoodo, ma tirtiri kartid wax codsi ah. Marka si aad u joojiso shaqadan waa inaad aadaa:
Dejinta / Waqtiga Shaashada / Xaddidan. Mawduuca iyo Asturnaanta.